गर्भनर नेपाल बिदामा नबस्ने - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिन १ महिना मात्र बाँकी भए पनि उनी बिदामा नबस्ने भएका छन् । कार्यकाल समाप्त हुन १ महिनाअघि गभर्नर बिदामा बस्ने प्रचलन छ ।
बिदा बस्नै पर्ने बाध्यकारी नियम नभए पनि दीर्घकालीन निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले बिदा बस्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय गभर्नरहरु बिदा बसेका र कतिपय नबसकेका उदाहरण छन् ।
याे पनि पढ्नुस धनगढीका विद्यालयमा ४ दिन बिदा
गभर्नर कार्यालयका अधिकारीका अनुसार डा. नेपालले बिदा नबस्ने सोच बनाएका छन् । अहिलेका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा कार्याकाल सकिनुअगाडि बिदामा बसेका थिएनन् । गर्भनर डा. नेपालले केही दिनमै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पनि गर्ने भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस आजको विनिमयदर कुन देशको कति? (सूचीसहित)
डा। नेपालको पाँच वर्षे कार्याकाल सकिन अब १ महिना मात्र बाँकी छ । उनी वि.सं. २०७१ चैत ८ गते गभर्नर बनेका थिए ।
सामान्यतया गभर्नरको कार्यकाल सकिन १ महिनाअगावै अगामी गभर्नरको नियुक्तिका लागि छनोट समिति गठन गर्ने चलन छ । तर, यसपटक भने सरकारले तयारीसमेत थालेको छैन । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
याे पनि पढ्नुस दशैंका लागि नयाँ नोट साट्ने ? यी ठाउँमा जानुस्
ट्याग्स: गर्भनर, डा. चिरञ्जीवी नेपाल, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिदा